संघिय संरचनामा बीमा कम्पनी, हेरौं कुन प्रदेशमा कस्तो उपस्थिती ! – Insurance Khabar
संघिय संरचनामा बीमा कम्पनी, हेरौं कुन प्रदेशमा कस्तो उपस्थिती !
प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७५, बिहीबार ०५:३६
काठमाडौं, वैशाख ६ । बीमा सम्बन्धी चेतना पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि नयाँ बीमा कम्पनीहरु थप भएसँगै शहर बजारमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप खेपेका बीमा कम्पनीहरु गाउँसम्म पनि पुगेको देखिएको छ ।
देश संघिय संरचनामा गएसँगै बीमा कम्पनीहरु पनि सोही संरचना अनुसार आफ्ना शाखा विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरेका छन् । बीमा समितिले दिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १६ जीवन बीमा कम्पनीले देशभर ९१२ शाखा कार्यालयबाट बीमा सेवा प्रवाह गरेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर ३ मा बीमा कम्पनीको उपस्थित अन्यको तुलनामा बलियो देखिएको छ । राजधानी काठमाडौ समेत रहेको यो प्रदेशमा बीमा कम्पनीले २१८ शाखाबाट सेवा दिएका छन् । अधिकांश बीमा कम्पनीहरुको मुख्य कार्यालय रहेको यो प्रदेशमा सबैजसो बीमा कम्पनीको बश्र्चव रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ मा १६३ शाखाबाट जीवन बीमा कम्पनीले सेवा दिएका छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा १४९ शाखा, प्रदेश नम्बर २ मा १३० शाखा, प्रदेश नम्बर ७ मा ११८ शाखा र प्रदेश नम्बर ४ मा ८१ शाखा कार्यालयबाट कम्पनीहरुले बीमा सेवा प्रदान गरेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नम्बर ६ मा बीमा कम्पनीहरुको उपस्थित कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेशमा १३ कम्पनीहरुका जम्मा जम्मी ५३ शाखा मात्रै रहेका छन् । यी कम्पनीहरुमध्ये मेटलाईफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाईफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सको उपस्थित देखिएको छैन् ।
कारोबार सञ्चालनमा आएका छोटो समयमा नै नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले करिब करिब देशका सबैजसो प्रदेशमा आफ्नो उपस्थित जनाएका छन् । पछिल्लो पटक अनुमति पाएका नौ बीमा कम्पनी मध्ये युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स र ज्योती लाईफले देशभर ५७ शाखाबाट बीमा सेवा दिएका छन् । छोटो समयमा नै बलियो कम्पनीका रुपमा स्थापित गराएका यी कम्पनीहरु सातै प्रदेशमा पुगेका छन् । त्यस्तै आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्स, सिटीजन लाईफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स र सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स सबै प्रदेशमा पुगिसकेका छन् ।
नेपालको जीवन बीमा व्यवसायमा बलियो उपस्थित जनाएको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले देशभर १२७ शाखा कार्यालयबाट बीमा सेवा प्रदान गरेको छ । कम्पनीको सबैभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेशमा केन्द्रिय कार्यालयसहित ३६ शाखा रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर १ मा २२ शाखा, प्रदेश नम्बर ५ मा २१ शाखा, प्रदेश २ र ७ मा १४/१४ शाखा रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा १०/१० शाखाबाट बीमा सेवा प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै विगत लामो समयदेखि नै बीमा व्यवसाय गरेको मेटलाईफको भने निकै कम शाखा रहेका छन् । कम्पनीले जम्माजम्मी २३ शाखाबाट बीमा सेवा दिएको हो । २ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा हालसम्म पनि आफ्नो उपस्थित नजनाएको मेटलाईफले प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी १० शाखाबाट बीमा सेवा दिएको छ ।